Sharci walaac ku abuuraya dadka isticmaala Internet -ka oo laga dhaqangalinayo Dalka Ingiriiska. |
Sharci walaac ku abuuraya dadka isticmaala Internet -ka oo laga dhaqangalinayo Dalka Ingiriiska.
Dowladda Ingiriiska ayaa wadda qorshe lagu diiwaan galinayo Baraha Internet -ka oo ay dadku booqdaan, waxaana qorshan ka soo horjeestay shirkadaha teknoolajiyada oo doonaya in ay bixiyaan hab ay ku qariyaan meelaha ay dadka booqdeen.
Sharcigan ayaa soo rogi kara in shirkadaha internetka bixiya,l looga baahan doono in ay diiwaan-galiyaan meelaha ay macaamiishooda booqdaan oo ay ku jiraan websiteyada iyo fariimaha la isugu diro baraha bulsahada.
Hay’addaha ammniga Ingiriiska ayaa sheegay in sharcigan uu caawin doono si looga hortago argagixisada, laakiin dadka dhaleecaynaya ayaa sheegaya in dadka kombiyutarada xogtooda u dhaca ay heli karaan xogta macaamiisha si fudud hadii sharcigan la dhaqan geliyo.
Sharciga (IPB) oo uu ansixiyay aqalka sare ee baarlamaanka Uk 19-kii November, ayaa dhaqan gallaya ka hor dhamaadka 2016.
Shirkadaha bixiya Internetyada gaarka ah ee ayaa ka faa’idaysanaya sharcigan bilaabanaya si ay adeegooda u bixiyaan.
VPNs ayaa si Digital ah u bixisa xogta meelaha uu booqday qofka waxayna u dirtaa xarumo kombiyutero ee xogta kaydiya oo ay leeyihiin (servers), inta aysan u gudbin website ama app uu qofka ka isticmaali karo.
“Waxaan aragnay sanadkii hore codsi badan oo ka yimid Australia markii sharciga diiwaan galinta xogta ay hirgashay, waxaana hadda arkaynaa koror ku yimid dad reer UK ah oo doonaya inay ogaadaan adeegan” ” ayey tiri Jodi Myer, oo ah afhayeenka NordVPN.